के विश्‍वकप २०११ को फाइनलमा फिक्सिङ भएकै थियो ? – Hamrosarokar
के विश्‍वकप २०११ को फाइनलमा फिक्सिङ भएकै थियो ?
By Hamrosarokar	 On ६ असार २०७७, शनिबार १८:४३
एजेन्सी, ६ असार–श्रीलंकाको सरकारले २०११ को विश्वकप फाइनलमा फिक्सिङ भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पूर्वखेलमन्त्री महिन्दान्दा अलुथगामाले २०११ मा श्रीलंकाले भारतसँग विश्वकप फाइनलमा फिक्सिङ गर्दै हारेको बताएपछि अनुसन्धान गर्न लागिएको हो। अलुथगामा २०१० देखि २०१५ सम्म खेलकुदमन्त्री रहेका थिए।
हाल उनी सरकारका ऊर्जा मन्त्री रहेका छन्। वर्तमान खेलमन्त्री डलास अलहैपरुाले यो मामिलामा जाँच गर्न आदेश दिएका हुन्। उनले हरेक दुई हप्तामा प्रोग्रेस रिपोर्ट बुझाउन भनेका छन्। श्रीलंकाको सिरसा टिभीसँगको कुराकानीमा अलुथगाले गम्भीर आरोप लगाएका थिए। उनले विश्वकप फाइनलमा फिक्सिङ भएको दाबि गरेका थिए।
आरोपपछि साँगाकाराले मागे सबुत
म्याच फिक्सिङको आरोप लागेपछि तत्कालीन कप्तान कुमारा संगकारा ब्याट्सम्यान महेला जयवर्धनेले पूर्व(खेलमन्त्रीसँग फिक्सिङको आरोप प्रमाणित गर्ने सबुत दिन आग्रह गरेका थिए। जयवर्धनेले चुनाव नजिक आएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए। उनले भनेका थिए ‘लाग्छ चुनाव नजिक आएको छ। सर्कस सुरु भयो।’
हामी २०११ मा जित्न सक्थ्यौं
पूर्व-खेलमन्त्री महिन्दान्दाले तत्कालीन समयमा आफूले यो विषयमा केही बोल्ने अवस्था नभएको बताए। यद्धपि उनले अब यो विषयमा बोल्न सक्ने समय आएको बताए । उनले भने ‘म यो विषयमा खेलाडीलाई मुच्छने पक्षमा छैन। तर केही समूह म्याच फिक्सिङमा सहभागी थिए।’
रणतुंगाले पनि फाइनल फिक्सिङको आरोप लगाए
तीन वर्षअघि श्रीलंकाका पूर्व-कप्तान तथा कमेन्टेटर अर्जुन रणातुंगाले पनि २०११ को विश्वकपको फाइनलमा टिम पराजित भएको विषयमा शंका गरेका थिए। उनले भनेका थिए ‘जम हामी हार्यौं म निकै दुखी थिएँ। साथै सक भएको थिएँ। २०११ को विश्वकप फाइनलमा श्रीलंका टिम किन हार्‍यो भने विषयको जाँच हुन अनिवार्य छ। म अहिले नै सबै विषयमा खुलासा गर्न सक्दिनँ तर एकदिन अवश्य भन्नेछु।’ रणातुंगा २०११ को फाइनल खेलका दिन मुम्बईको वानखडे मैदानमा कमेन्ट्री गरिरहेका थिए।
श्रीलंकाका एक अन्य पूर्व-खेलमन्त्री हरिन फर्नान्डोले पनि श्रीलंका क्रिकेटमा माथिदेखि तलसम्मै ठूलो भ्रष्टाचार रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, आइसिसीले पनि श्रीलंकालाई क्रिकेटमा विश्वको सर्वाधिक भ्रष्ट देश मध्येमा लिने गरेको छ।
भारतले २८ वर्षपछि जितेको थियो विश्वकप
२०११ मा मुम्बईमा भएको फाइनलमा भारतले श्रीलंकालाई ६ विकेटले पराजित गर्दै २८ वर्षपछि फाइनल जितेको थियो। यो खेलमा श्रीलंकाले पहिले ब्याटिङ गर्दै ६ विकेट गुमाएर २७४ रन बनाएको थियो। जयवर्धनेले १०३ रन बनाउँदा संगकाराले ३० तथा कुलशेखराले ४० रनको योगदान दिएका थिए। लक्ष्य पछ्याएको भारतविरुद्ध मलिगाले सचिन र सहवागलाई चाँडै आउट गरेका थिए।
तर, गौतम गम्भीरले ९७ रन तथा महेन्द्र सिंह धोनीको अविजित ९१ रनको सानदार ब्याटिङका कारण ४८।२ ओभरमै ४ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटाउँदै दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो।
आइसिसीले पनि भ्रष्टाचारमा छानविन गर्दै
क्रिकेटमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विवादमा प्राय श्रीलंकाको नाम जोडिने गरेको छ। यस महिनाको सुरुमा श्रीलंकाको क्रिकेट बोर्डले आइसिसीले भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन गरिरहेको जानकारी गराएको थियो। बोर्डले तीन पूर्व-खेलाडीको जाँच भइरहेको जनाएको छ। यद्धपि खेलाडीको नाम भने सार्वजानिक गरिएको छैन।
‘म्याच फिक्सिङ’ मुद्दामा तात्कालीन कप्तान सागर…
जंगलमा हात बाँधेर घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो शिक्षकको
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध साढे १० बजे नै संसद्‍मा दर्ता…
देशभर थपिए ३ सय ३१ कोरोना संक्रमित
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८,६०५ पुग्यो